Noorweey oo ku baaqday in qaxootiga ka soo talaabaya Afrika celiyo inteeysan soo gaarin Yurub | Somaliska
Wasiiradda u qaabilsan socdaalka iyo is dhexgalka dalkaasi Noorweey haweeneyda lugu magacaabo Sylvi Listhaug, ayaa sheegtay in qaxootiga ka soo talaabaya qaaradda Afrika ay haboon tahay in dib loogu celiyo ka hor inteeysan soo gaarin Yurub.
Wasiiraddan ayaa sheegtay hadalkaan mar ay ka hadleeysay tahriibayaashada badaha u dhaxeeya afrika iyo Yurub ee ku dhamaanaya ama isku biimeeya. Haweeneydan ayaa dhinaca kalena masuugtay kooxaha ilaaliyaha xeebaha Yurub, kuwaas oo ay ku tilmaantay in qudhooda ay ka macaashaan dadkaasi tahriibayaasha ah. Waxeey sidoo kale sheegtay ineey jiraan dadyow ay ku sheegtay ineey dhaqaalo doon yihiin kuwaas beey tiri waxeey culus badan ku yihiin nidaam-ka u degsan qaaradda gaar ahaan xagga nolosha.
Waxeey misna tilmaantay in la kala garan la’yahay qaxootiga rasmiga ah ee ka soo carara colaadaha iyo xasilooni darrada ka taagan dalalkooda. Halka kuwo dhaqaalo doonka ahi ay yihiin kuwo ku soo kordhiyey culeys iyo qarashaad badan.
Si kastaaba ahaatee hadalka wasiiradda ayaa imanaya xilli dalka Jarmalku soo jeediyey hindsi looga hortagayo muhaajiriinta tirada badan ee soo dhex jibaaxa baddaha halista ah, halkaana ku dhinta maalin walba. Dalka Denmark ayaa sidoo kale aad ugu riyaaqasay hindaha Jarmalku ku doonayo in laga hortago qaxootiga qaaradda Afrika ka soo talaabo.
Wadamada Midowga Yurub ayaa kal hore waxaa ay soo bandhigeen qorayaal la mid ah kan haatan Jarmalku soo jeediyey, hase ahaate ku guul dareysan jiray ineey fuliyaan sababo ay ku sheegeen in xeerka bani’aadnimada meel uga dhacayo. Balse haatan hindisahaani u muuqdo mid midowgu ay u riyaaqeen.